Mombamomba ny orinasa - HEBEI ORIENT IMPORT & EXPORT CO., LTD
Ny vokatray rehetra dia nankatoavina tamin'ny mari-pankasitrahana avy amin'ny CE, ISO, FDA.
Ny vokatray lehibe dia misy toy izao:
Syringe azo ampiasaina: Syringe mialoha, fanjaitra hypodermic, setroka fanosotra, vina an-doha, IV cannula, lancet amin'ny rà, scalpel, fantsom-panangonana rà mandriaka, kitapo ra, kitapo urin.
Fonon-tanana azo ampiasaina: toy ny fonon-tanana latex, fonon-tànana nitrile, fonon-tànana vinina ary fonon-tànana PE.
Vokatra tsy tenona fanary: toy ny saron-tava, fonony kiraro, kapila Mob, satroka Bouffant, satroka mpandidy, akanjo, lambam-pandriana, lambam-pandriana, eo ambanin'ny pad, tanany sns.
Akanjo fitsaboana: ao anatin'izany ny bandy adhesive elastika, bandage cohesive, PE, kasety tsy misy tenona ary Zinc Oxydère, plastika ratra, plaster sns.
Fanomezana fitsaboana amin'ny laoniny: toy ny seza misy kodiarana elektrika, seza misy kodiarana aluminium, seza misy kodiarana vy, seza misy kodiarana miverina, mandeha, sarety, tehina ary hazo sns.
Kitapo fitsapana diagnostika: toy ny fitsapana ny fitondrana vohoka, fitsapana ovulation, VIH, HAV, HCV, tazomoka, H-pylori, sns.
Kitapo nify: ao anatin'izany ny syringe nify, ny ascenseur amin'ny rora, ny herinaratra mifarana indroa, ny famotopotorana nify indroa, ny aretin-tratra sns.
Vokatra gynecological: toy ny fivaviana, ny savony, ny vavony, ny vozon'ny tranon-jaza, ny sotro amin'ny vozon-tranonjaza, ny rambrush amin'ny vozon'ny tranon-jaza, ny curette suction endometrial, spatula vozon-tranonjaza, spatula hazo, kitapo gynéological.
Vokatra fivarotam-panafody: toy ny mpanara-maso ny tosidra, ny metatra glosazy, ny handrina ary ny thermoeter dizitaly, ny oxymeter an-tànan-droa, ny mpanolotra savony mandeha ho azy.
Ho lasa orinasa tena tsara atokisan'ny mpanjifa sy ny mpiasa!
Manampy ireo mpiasa hitombo sy hiara-hiasa hamorona famirapiratana!
Fihetsika: fahasalamana, fahatokisan-tena, fahamarinana, fizarana, fankasitrahana! Hetsika: asa, fahombiazana, fiaraha-miasa, firehetam-po ary fandresena!